600W Led Stadium Light outside of Waterproof China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Egwuregwu egwu,Ebube na-enwu enwu maka Stadium,Egwuregwu Egwurugwu
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu Egwuregwu Football > 600W Led Stadium Light outside of Waterproof
Ihe Nlereanya.: BB-LD-600W-Q
Anyị Dugara Stadium Light nwere ike belata gị electronic ụgwọ site ruo 82%, 2000W HPS / zoro nnọchi na 600W. Nke a Ikanam ọkụ maka Stadium na-gosiri maka 50,000 awa nke iji, elu àgwà Aluminium ala ihe onwunwe na-enye ọtụtụ ebe ihe ọma n'ihi okpomọkụ dissipation. Egwuregwu Stadium nke 600w nwere nsonaazụ ọkụ luminere 78000Lm site na 130LM / WATT. Mmiri idei mmiri anyị nwere 600w dị mma iji mee ka ìhè na-egbukepụ ụgbọala, nzọ ụkwụ, ụlọ azụ, ụlọ, nchebe nchebe abalị, ngwa ngwa ahịa nke ebe obibi. Egwuregwu egwuregwu niile enwere nkwenye EC ROHS.
Anyị a na-ekpuchi ọkụ ọkụ maka ebe egwuregwu maka afọ ise anyị na-enweghị njedebe. Naanị ịkpọ ma ọ bụ zitere anyị ozi maka ngwa ngwa dị mfe.
Led Akara 500w 130lm / w Kpọtụrụ ugbu a
Led Akara 600w 130lm / w Kpọtụrụ ugbu a
Enyocha Ebe Ahịa 800w 130lm / w Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 300W Ọpụpụ LED Stadium Light Light Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 500W Ọpụpụ LED Stadium Light Light Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 600W Ọpụpụ LED Stadium Light Light Kpọtụrụ ugbu a
BrightStar 800W Ọpụpụ LED Stadium Light Light Kpọtụrụ ugbu a
300W LED High Mast Stadium Light Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Egwuregwu egwu Ebube na-enwu enwu maka Stadium Egwuregwu Egwurugwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwu 640W Egwuregwu Egwuregwu egwu eji ere Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Led Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W